Musharrax Asad Cismaan Diyaano oo Garoowe si Cajiib ah lagu soo dhaweyeey (dhegayso/Sawiro) – Radio Daljir
Diseenbar 9, 2018 4:51 g 0
Musharrax Madaxweyne Puntland 2019 Asad Cismaan Cabdulaahi Diyaano ayaa maanta si ka duwan soo dhaweeyntii musharrixintii horre lagu soo dhaweyeey Caasimadda Puntland ee Garoowe.
Dadweyne farabadan oo isaga kala yimaaday Xaafadaha Garoowe ka koobantahay iyo dadweyne kale oo kaso raacay musharrax degmadda Dangorayo ee gobalka Nugaal ayaa Asad kusoo dhaweyeey Caasimadda.
Barxadda Garoowe oo ah halka inta baddan dadku isugu soo baxaan madaxduna dadka kula hadlan ayaa ahayd mid buux dhaaftay,iyaddo dadka soo dhaweyeey Musharrax Asad Cismaan ka tira badnayeen kuwi horey uso dhaweyn jirray musharrixinta kale.
Hareeraha laamiga waxaa safnaa Boqolaal shacab ah oo mar uu doonayeey inay Gacanta la helaan Asad ama ay salaaman kuwaas oo isugu jiray Arday,Aqoonyahano,Nabadoono,Ganacsato,Hoyooyin,iyo qurbajoog horey Garoowe ugu sugnaa.
Waxaa kamid ahaa waxyaabaha Cajiibka ah ee Musharrax Asad Cismaan kaga duwanaa Musharrixinta kale waxaa soo dhaweyey dhalinyaro saarna Fardo,kuwaas oo ilaa inta uu halka laga khudbeeyo imanayeey.
Amaanka Guud ee halka uu ka khudbaynayeey Musharrax Asad waxaa sugayeey Ciidamadda Amniga Puntland iyo Kuwa Amaanka ee PSF,horeyna uu taliye uga ahaa.
Qaar kamid ah waxgaradkii soo dhaweyeey ayaa Musharraxa usoo jeediyeey kalmado dardaran iyo dhiirigalin isugu jirra maadama uu yahay nin da’yar ah.
Musharraxa oo dadweynaha kula hadlay Baraxdda Garoowe ayaa uga mahadceliyeey shacabka Garoowe sida ay usoo dhaweyeen isago sheegay in wakhti badan qaadan donaan xafladda waaweyn oo uu kula hadlayo shacabka Garoowena ay qabsan donaan.
Waa musharrixi ugu horeyeey oo dadweyne aad u farabadan sidaas ugu soo dhaweyaan Caasimadda Puntland ee Garoowe,iyaddo dadka qaar ku tilmaameen in uu Asad yahay nin dhalinyaro ah,inta baddana dadka soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay ay u badnayeen dhalinyaro.